Fotoam-pahavaratra :: Mpianatra efajato sy dimy arivo hahazo tohana ara-tsakafo • AoRaha
Fotoam-pahavaratra Mpianatra efajato sy dimy arivo hahazo tohana ara-tsakafo
Mpianatra manodidina ny dimy arivo no hahazo tohana any amin’ny Faritra Atsimo Andrefana. Tetikasa izay tohan’ny Fandaharanasan’ny Firenena Mikambana misahana ny fanjarian-tsakafo na PAM, amin’ny alalan’ny tetikasa fandefasana vola any amin’ny sekoly. Ny fanome­zana sakafo any an-tsekoly, izay tafiditra ao anatin’ny fandaraharanasam-pirenena mahakasika izany.
“Manome tohana an’ireo sekoly amin’ny alalan’ny lelavola mba hanomezana tohana ireo sekoly,haha­fahan’izy ireo mividy sakafo vaovao sy miovaova. Ity fomba fiasa ity izay natao hanomezana sakafo isan-karazany ireo mpianatra sy manatsara ny sakafon’izy ireo ary fandraisana anjara ihany koa ami’ny fampandrosoana ireo tsena any an-toerana”, hoy i Fatimata Sow Sidivé , tale lefitry ny PAM, eto Mada­gasikara nandritra ny fampahafantarana ny tetikasa “ Cash école”, tany Toliara, omaly.
Misy ny fanohanana ireo sekoly amin’ny alalan’ny fiza­rana sakafo efa maina toy ny vary, katsaka ary tsaramaso sy ny fanomezana sakafo vaovao toy ny voankazo sy ny legioma. Sekoly fanabeazana fototra miisa valo any Toliara voalohany sy faharoa no hisitraka ity tetikasa ity, toy ny EPP Anketa, Belalanda, Sakabera, Mahavatse fahoara, Tsongobory, Tanandava Mikamba , Tsinjoriake sy Motombe. Marihina fa mpianatra manodidina ny telo hetsy avy amin’ny EPP manodidina ny zato sy arivo any amin’ny Faritra Androy, Anosy sy Atsimo Andrefana no mahazo tohana ara-tsakafo avy amin’ny PAM sy ny minisiteran’ny Fanabea­zam-pirenena , ny fampianarana teknika sy araka asa, amin’ny alalan’ny fandaharanasa sakafo an-tsekoly.
Vohoka tsy nirina :: Miverina ny fitakiana amin’ny fampandaniana ny lalàna momba ny fanalan-jaza